सवारी साधनहरुको निम्ति नयाँ नियम: सरकारी कर्मचारीहरुले अनधिकृत छुट्टी लिएमा एल.डब्लु.पी - The Sikkim Chronicle
SC Desk Feb 24, 20210219
सवारी साधनहरुको निम्ति नयाँ नियम: सरकारी कर्मचारीहरुले अनधिकृत छुट्टी लिएमा एल.डब्लु.पी
गान्तोक, 24 अगस्त: राज्यको वाहन चलाचलको प्रतिबन्धमा केही फेरबदल गर्दै गृह विभागले एउटा आदेश जारी गरेको छ। अब सबै व्यक्ति तथा सवारी साधनहरुलाई हर हप्ताको सोमबारदेखि-शुक्रबारसम्म एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला अनि जिल्लाभित्र आउ-जाउ गर्न सरकारद्वारा अनुमति दिइएको छ। सबै यात्रीले कोभिड-19 नियामावालीलाई सम्पूर्ण रुपमा पालन गर्दै यात्रा गर्नु पर्नेछ। यसका साथै वाहन चलाचलमा जोड़-बिजोड़को नियम […] The post सवारी साधनहरुको निम्ति नयाँ नियम: सरकारी कर्मचारीहरुले अनधिकृत छुट्टी लिएमा एल.डब्लु.पी appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Aug 24, 2020 - 13:18
गान्तोक, 24 अगस्त: राज्यको वाहन चलाचलको प्रतिबन्धमा केही फेरबदल गर्दै गृह विभागले एउटा आदेश जारी गरेको छ। अब सबै व्यक्ति तथा सवारी साधनहरुलाई हर हप्ताको सोमबारदेखि-शुक्रबारसम्म एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला अनि जिल्लाभित्र आउ-जाउ गर्न सरकारद्वारा अनुमति दिइएको छ।
सबै यात्रीले कोभिड-19 नियामावालीलाई सम्पूर्ण रुपमा पालन गर्दै यात्रा गर्नु पर्नेछ। यसका साथै वाहन चलाचलमा जोड़-बिजोड़को नियम पालन गर्नुपर्नेछ। शनिबार अनि आइतबार सबै व्यक्ति तथा सवारी साधनको चलाचल बन्द रहनेछ। स्थानीय क्षेत्र (लोकल एरिया)मा मात्रै यी दुई दिन पनि वाहन चलाचलको अनुमति दिइएको छ। कन्टेन्मेन्ट जोनमा कोभिड नियमअनुसार सबै व्यक्ति तथा वाहनहरुको चलाचल निषेधित रहनेछ।
सम्पूर्ण मालवाहक गाड़ीहरुको निम्ति भने गत 10 अगस्तमा जारी गरिएको आदेश अनुसार आउ-जाउ गर्ने अनुमति यथावत रहनेछ।
सम्पूर्ण सरकारी कार्यलयहरु अर्को आदेश जारी नभएसम्म हर हप्ता शनिबार अनि आइतबार बन्द रहनेछन्। यी दुई दिन सबै प्रमुखहरुले आफ्ना विभागीय कार्यलयमा सेनिटाइजेसनको व्यवस्था मिलाउन पर्नेछ।
कोभिड संक्रमितका सोझै सम्पर्कमा आएका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरुको निम्ति स्वस्थ्य विभागले नामावाली जारी गर्दै उनीहरु क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने समय तोकेर सम्बन्धित विभाग प्रमुखलाई जनाउनेछ। विभागीय प्रमुखले सो जानकारी प्राप्त भएपश्चात ती कर्मचारीहरुका निम्ति विशेष छुट्टीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। विभागीय प्रमुखले छुट्टीको व्यवस्था नगरेसम्म कुनै पनि सरकारी कर्मचारीहरु आफै छुट्टी लिन पाउने छैनन्। अनधिकृत छुट्टी लिँदै कार्यलय नआएको खण्डमा त्यसलाई अवैतनिक छुट्टी (एल.डब्लु.पी) मानिनेछ।
The post सवारी साधनहरुको निम्ति नयाँ नियम: सरकारी कर्मचारीहरुले अनधिकृत छुट्टी लिएमा एल.डब्लु.पी appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Bimal Thapa Oct 10, 20200875
Bimal Thapa Jul 8, 20200353
Bimal Thapa Jun 25, 20200377
SC Desk Feb 18, 20210655
SC Desk Feb 24, 20210225
admin Sep 1, 20200571
Devika Gurung Jan 12, 20200774
SC Desk Oct 11, 202001320
SC Desk Sep 19, 202001495
SC Bureau Aug 15, 20200889
SC Bureau Sep 19, 202002289
SC Desk Oct 23, 20200574
Rohonit Hang Subba Jan 28, 20200507
Diki Choden Bhutia Sep 12, 202004592